Ciidammada Liyuu Booliska Oo Deeqo kala Duwan U Qaybiyay Dadkii Ku Barakacay Dagaal Beeleedkii Ka Dhacay Konfurta Sool.(Sawiro) | Awdalmedia.com
Ciidammada Liyuu Booliska Oo Deeqo kala Duwan U Qaybiyay Dadkii Ku Barakacay Dagaal Beeleedkii Ka Dhacay Konfurta Sool.(Sawiro)
Ciidammada Liyuu Booliska Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa markii ugu horaysay deeq iskugu jirta raashin, dhar iyo bustayaal u qaybiyay dadkii ku barakacay dagaal Beeleedkii dhawaan ka dhacay deegaanka Dhumay ee koonfurta gobolka Sool.
Dadkan barakacayaasha ee deeqdan kala duwan loo qaybiyay ayaa ku sugan magaalooyinka Dharkayn Geenyo iyo Saax-dheer oo ka tirsan gobolka Sool.
Deeqdan oo ka timid madaxweynaha Deegaanka Soomaalida Itoobiya md.Mustafe Cagjar ayaa maanta la gaadhsiiyay dadkii colaada ku barakacay.
Sidoo kale dadka barakacayaasha oo ka mahadceliyay deeqdan ayaa madaxwayne Cagjar ku amaanay talaabada geesinimada leh ee uu ka qaatay colaada beelaha walaalaha ah ee koonfurta Sool, iyagoo xusay inuu madaxwaynuhu markii ugu horaysay uu deegaanka u soo diray ciidamo kala dhex gala labada beelood ee ku dagaalamaya deegaanka Dhumay.
Dadka Deegaanka ayaa ugu denbayntii madaxwaynaha ugu baaqay inuu joogteeyo deeqaha uu ku gargaarayo dadka barakacayaasha.